Samsung Neon - AI Virtual Mubatsiri | TeraNews.net
Samsung Neon - AI Virtual Mubatsiri
Munyori Nikitin Eugenius Yakabudiswa pa 23.12.2020
Zvakanaka, pakupedzisira, edu maindasitiri hofori akawana nguva yekusvetuka kukuru mune ramangwana. Haikwanise kudaidzwa neimwe nzira. Samsung nyowani tekinoroji yeNeon ndeye AI-powered chaiyo mubatsiri. Rangarira mafirimu nemitambo yemakomputa, uko panoratidzwa tafura yekubatsira pakaonekwa mufananidzo wemunhu anokwanisa kuitisa nhaurirano online. Iyo # 1 brand yeKorea yakabudirira mukugadzira iyi tekinoroji ive yechokwadi. KuCES 2020, Samsung yakaratidza kushanda kweprojekiti yeramangwana.
RGB yakadzosera LCD skrini. Kutonhorera Hi-Fi acoustics. Maikorofoni emhando yepamusoro. Yakanyanya inonzwika minwe scanner. Izvi ndizvo zvese zvinhu zvidiki izvo chero mugadziri weChinese anogona kuita. Chinhu chikuru cheiyo Samsung Neon system uropi. Kana pane kudaro, njere dzekunyepedzera dzinogona kupindura zvakakwana kune ese mushandisi zvikumbiro.
Uye pano, ivo vanogadzira yekuSouth Korea kunetsekana vakakwanisa kuita budiriro yehunyanzvi. AI inokwanisa kwete kungo chengetedza hurukuro neasvikiro pane yakasarudzika musoro wenyaya. Uye gesticulate, kuratidza kumeso kumeso kwemunhu chaiye.
Ndeipi ramangwana reSamsung Neon - nei ichidikanwa
Kana tikadzokera kumashure (mafirimu nemitambo), saka chirongwa ichi chakafanirwa kuve chikamu chemasangano ehurumende nemakambani akazvimirira. Samsung Neon mubatsiri akazara-anokwanisa kugadzirisa chero mushandisi nyaya. Iko kusarudzika kweichi chirongwa kuri kutevedzera kutaurirana nemunhu mupenyu. Kutarisana kwemaziso, kubva pakuona kwepfungwa, kunowedzera kutarisisa uye chivimbo cheanopindirana.
Zvisingazivikanwe, zvivakwa zvakaita semabhangi, masangano emari, mabhizinesi evashandi veveruzhinji, nhandare dzendege nezviteshi zvechitima zvinoda kuitwa kweSamsoni Neon. Iko kushanda kweiyo system kunokutendera iwe kuti uverenge ekubhadhara makadhi, kubhadhara. Ita zvimwe zviito kana mushandisi achizivikanwa nechigunwe. Pfungwa iyi yakanaka, sekuita kwacho. Zvese izvo zvino zvinoenderana nechishuwo cheSamsung, icho chinofanirwa kuzivisa mutengo wezvakagadzirwa.
WhatsApp mutumwa anodonhedza Facebook ruzivo?
Pfuti pfuti Huawei Sony PlayStation uye Microsoft Xbox
TV-Bhokisi T98 mini - nyowani rekodhi yekupisa muna 2021
Ndeipi fashoni yeanosimudza - chirimo-chirimo 2021
Samsung Galaxy Tab Active3 - 8 ”mota ine zvombo
Gazer F725 - mota dvr: wongorora